" ဗြိတိသျှကောင်စီ စာမေးပွဲဌာနနှင့် CROWN Education တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်မည့် IELTS စာမေးပွဲအသစ်များအကြောင်းနှင့် ၁၀၀% အင်္ဂလန်ပညာသင်ဆုအကြောင်း ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် ပြုလုပ်ပေးမည်" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်IELTS စာမေးပွဲအသစ်များအကြောင်းနှင့် ၁၀၀% အင်္ဂလန်ပညာသင်ဆုအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားသူကျောင်းသားမိဘများစာရင်းပေးတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။.(၁) ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ဗြိတိသျှကောင်စီ စာမေးပွဲဌာနမှ... Read more... "ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးနယ်ပယ် အသီးသီးတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှု၏ အရေးကြီးပုံများအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားမည်" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးနယ်ပယ် အသီးသီးတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှု၏ အရေးကြီးပုံများအကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ အနာဂတ်စီးပွားရေး တွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် အဓိကျလာမည့် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အရည်အသွေး များကို ရရှိနိုင်မည့် ယူကေတက္ကသိုလ်များ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ Double Majour ဘွဲ့များအကြောင်းကို CROWN Education... Read more... "နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် နှင့် IELTS ပညာသင်ဆု အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ ဗြိတိသျှကောင်စီ စာမေးပွဲဌာနနှင့် CROWN Education တို့ ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် ပြုလုပ်ပေးမည်" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် နှင့်IELTS ပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းများ အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ဗြိတိသျှကောင်စီ စာမေးပွဲဌာနနှင့် CROWN Education တို့ ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားသူကျောင်းသားမိဘများစာရင်းပေးတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။.(၁) ကျောင်းသားကေ... Read more... “သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ် JAMES COOK UNIVERSITY ဘွဲ့ ကို မြန်မာနိုင်ငံ (၁)နှစ်၊ စင်္ကာပူ (၁)နှစ်နှင့် သြစတြေလျနိုင်ငံတွင် (၁)နှစ်ခွဲ ဖြင့် ၂၀၁၆ မှစတင်တက်ရောက်သင်ယူနိုင်တော့မည်” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် Edu Trust Star ရရှိထားသော သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် JAMES COOK UNIVERSITY ဘွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ (၁)နှစ်၊စင်္ကာပူ (၁)နှစ်၊ သြစတြေလျနိုင်ငံတွင် (၁)နှစ်ခွဲဖြင့်တက်ရောက်နိုင်သည့်အစီအစဉ်ကို စတင်လျက်ရှိရာ ကျောင်JAMES COOK UNIVERSITY တွင်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် သတ်မှတ် ထားသည့် (၁၀)တန်းအမှ... Read more... မြန်မာနိုင်ငံ International School မှ Grade 9နှင့် Secondary ကျောင်းသားများ အတွက် iGCSE နှင့် ပညာရေးလမ်းကြောင်းများ အကြောင်းသိကောင်းစရာ ဆွေးနွေးပွဲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာနိုင်ငံရှိ International Schoolsမှ Gread 9နှင့် Secondary(Sec 1,2,3,4) ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတွက် iGCSE နှင့် နိုင်ငံတကာပညာရေးလမ်းကြောင်းများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း အကြောင်း ဟောပြောပွဲကို CROWN Education နှင့် စင်ကာပူ Kaplan တို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။SEMINAR ဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျ... Read more... “လူငယ်များနဲ့ ပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ” (Preparing students for future challenges) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ✅ လူငယ်တွေဘာကြောင့် ကိုယ့်ဝါသနာကို ကိုယ်သိဖို့ခက်နေရတာလဲ….✅ ဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းကရော တကယ့် ဘဝအတွက်စစ်မှန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါ့မလား....✅ လူငယ်နဲ့လူကြီးတွေကြားဘယ်လိုနားလည်မှုတည်ဆောက်မလဲ...✅ ပြောင်းလဲလာနေတဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာကိုယ့်ကလေးတွေလိုက်လျောညီတွေမှုရှိအောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးရမလဲ...✅ တက္က... Read more... သြစတြေးလျနိုင်ငံ Monash University ၏ ဘွဲ့ကြိုတန်းသို့ တိုက်ရိုက် တက်ရောက်နိုင်မည့် ဒီပလိုမာကို စင်ကာပူ TMC တွင် သင်ယူနိုင်မည် ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံ Monash University ၏ ဘွဲ့ကြိုတန်းများကို တိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်မည့် ဒီပလိုမာကို စင်ကာပူ TMC Academy တွင် သင်ယူနိုင်ရန် CROWN Education တွင် စတင်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။Monash University, Australia (Caulfield/ Clayton) ၏ Bachelor of Arts (various majors available) မ... Read more... Pages« first